War deg deg ah:Al-Shabaab oo gubay markab dagaal oo Kenya leedahay (Daawo) – SBC
War deg deg ah:Al-Shabaab oo gubay markab dagaal oo Kenya leedahay (Daawo)
Posted by editor on November 20, 2011 Comments
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtey inay gubeen markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Kenya, kaasi oo ka mid ah gaadiid dagaal oo Kenya u soo dirtey Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda Shabaabka.
Warsaxaafadeed ka soo baxay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ay ku gubeen markabkaasi oo ku sugnaa xeebaha gobolka Jubada Hoose, waxaana arinkan ay ku sheegteen warasaxaafadeed ay soo saareen.
“ Mujaahidiinta oo adeegsanaya Doomaha dheereeya ayaa weerar la beegsaday Laba Markab oo ku sugnaa inta u dhaxaysa Jaziiradaha Kudhaa iyo Madhawo ee Wilaayada Jubooyinka saacadu markii ay ahayd 3:00 oo habeenimadii Xalay, Is-rasaasayn culus oo goobta ka dhacday kadibna mid ka mid ah Maraakiibtii cadawga ayaa dab weyn ka kacay kadib markii gantaalo ay haleeleen, halka midkii kalena uu goobta iskaga baxsaday isaga oo aan waxba gaarin” ayaa lagu yiri War-Saxaafadeedka kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
War-Saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Labada markab ee Cadawgu ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku gaaf-wareegayeen Jaziiradaha deegaanka “ Joorre” iyagoo wal-wal ku abuuray dadka deegaanka isla markaana ka hor-istaagay inay Xeebaha Jaziiradahaas ka kaluumaystaan sidoo kalena dhawaan rasaas ay fureen ku bur-buriyay Dooni Ganacsi oo ay dad Soomaaliyeed lahaayeen halkaasna ku dilay ku dhawaad 20 qof oo Kaluumaysato ah” Waa sida lagu sheegay War-Saxaafadeedka.
Dhanka Dhulka ayaa lagu sheegay War-Saxaafadeedka in Ciidamada Milatariga Mujaahidiinta Al-Shabaab ay wadada u galeen Kolonyo gaadiid ay lahaayeen Dowlada Kenya kuwaas oo kasoo ambabaxay deegaanka Taabto kuna sii jeeday Degmada Dhoobleey, halkaasna lagu gaarsiiyay Khasaaro lixaad leh.
“ Mujaahidiintu waxay dhaba-gal ku sameeyeen Lix gaari oo Cadawgu lahaa inta u dhaxaysa Taabto iyo Dhoobleey, Dagaal socday muddo Hal Saac ah kadib waxaa Mujaahidiinta u suurta gashay inay Gubaan labo gaari oo cadawgu lahaa oo uu ku jiro Gaari Nooca “Laand Kuruusarka ah” oo ay la socdeen Saraakiisha Kenya, Waxaa kale oo Kufaarta Kenya ee soo duushay goobta uga Dhimatay 8 Askari oo kale “ ayaa lagu yiri War-Saxaafadeedka.
Gabagabadii ayaa War-Saxaafadeedka Xarakada Mujahidiinta Al-Shabaab lagu sheegay in iyadoo ay sii kordheyso damaca iyo hanqal-taaga Cadawga is-bahaystay ay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka go’antahay inay dadka Muslimiinta ah ka Difaacaan nooc walba oo gumaysi ah hadii uu ahaan lahaa mid maskaxeed iyo mid dhuleed intaba, sidoo kale Boobka lala damacsanyahay in lagula kaco khayraad wadanka .
Haaaa guba cadowga
waxaan umalynayaa inay shabaab ay beentoodii hore dadkaku harqinayaan xagey ku arki karan markab kenya ledahay waxaan filayaa doon kulaymaysato somaliya leeyihiin bay dabka saareen